Beled Weyne - Taxanaha Maxaabbiistii 77 - Qaybta Toddobaad - Caasimada Online
Home Warar Beled Weyne – Taxanaha Maxaabbiistii 77 – Qaybta Toddobaad
Beled Weyne – Taxanaha Maxaabbiistii 77 – Qaybta Toddobaad
Muqdisho (Caasimada Online)-ICRC waxay Geneva ka soo magacowday 1987 Richard Anderegg oo ah Madaxa ICRC ee Soomaaliya. Waa nin firfircoon, howsha samafalkana sida diin oo kale u aamminsan. Cidna aan ka gabban marka ay baahi samafal u muuqto. Annagana sidoo kale nagu dhiiri geliya.
Waxaan u gudubnay Buulo Burte. Waxaa Jowhar nooga billowday waddo wanaagsan oo ay Dowladda Kacaanku dhistay. Waxaan gaarnay Buulo Burte. Waa magaalada aan ka dhigtay Dugsiga Hoose. Waa magaalo aan guri guri u aqaan. Waxaan ku lahaa xiriirro fara badan oo ah ciidanka ay aabbahay wada shaqeynayeen, macallimiinta oo hadda qaarkood ay yihiin ardaydii aan isku fasalka ahayn sida Axmednuur Shiikh Cilmi oo gacan na siiyay, bahda Sportiga oo ay magaaladu caan ku tahay iyo dad kale oo badan.